केही दिनपूर्व विदेशी लगानीमा सञ्चालित टेलिकम कम्पनी एनसेलको मुख्य टावर नख्खुमा बम विस्फोट हुँदा एक जना नागरिकले अनाहकमा जीवन गुमाउनु प¥यो । केही घाइते भए । त्यही दिन एनसेलको देशभरिका विभिन्न टावरमा बम विस्फोट भए । विदेशी लगानीमा सञ्चालित एनसेलको टावरमाथि शृंखलाबद्ध रुपमा बम विस्फोट हुँदा एकाएक सुरक्षा चुनौती थपिन पुगेको छ । साथै, निरन्तर बम विस्फोटका घटनाले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अझै निर्माण भइसकेको छैन कि भन्ने संशय गर्ने छुटसमेत दिलाएको छ ।
एनसेल, विदेशी लगानीमा खोलिएको ठूलो टेलिकम कम्पनी हो । उक्त कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमतावान् कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । तर, केही वर्षयता भने राजश्व छली प्रकरणमा एनसेल मुछिदै आएको छ । सरकारी संयन्त्रको फितलोपनाका कारण र वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई करको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण र समयमै कदम चाल्न नसक्नुको परिणाम यस्तो समस्या उत्पन्न हुन पुगेको देखिन्छ ।
एनसेलको टावरमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोटको जिम्मा अझैसम्म पनि सशस्त्र द्वन्द्वकै रटान गर्ने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले लिएको छ । जनयुद्ध अपुरो भएको उद्घोष गर्दै पुनः जनयुद्ध थाल्ने दिशामा क्रियाशील विप्लव समूहले बम विस्फोटको जिम्मा लिनुले सुरक्षा चुनौती एकाएक थपिन पुगेको छ । देशमा वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेको बेला शान्ति सुरक्षा कायम होला भन्ने अपेक्षामा शृंखलाबद्ध बम विस्फोटले संशय पैदा गरेको छ । विप्लव समूहले आज एउटा विदेशी कम्पनीमाथि बम विस्फोट गराएको छ भने भोलि यस्तै प्रकृतिका घटनाहरु नघटाउलान् भन्ने कुनै आधार छैन । यसले ठूलो सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।
त्यसो त, एनसेलको टावरमा बम विस्फोटका घटनालाई सामान्य रुपमा लिनु गल्ती हुने छ । योे घटनाले दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । विगतमा दस वर्षे जनयुद्धको बेला नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेन । विद्रोही माओवादी शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि तरल र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बनेन । मूलतः २०५२ सालयता वैदेशिक लगानी भित्रिने अवस्था सिर्जना हुनबाट वन्चित रह्यो । विदेशी लगानीकर्ताहरुले भन्ने एउटै वाक्य हुन्थ्यो, ‘लगानीका लागि उचित वातावरण छैन ।’ सशस्त्र द्वन्द्व, तरल राजनीतिक अवस्थाजस्ता कारणहरुले वैदेशिक लगानी नभित्रिएको कुरामा शतप्रतिशत सत्यता छ ।
अहिले देश द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिक स्थितिबाट मुक्त छ । देशमा दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेर वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर क्रियाशीलता देखाइरहेको छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ । दस वर्षभित्र दस लाख नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित तुल्याउने र त्यसका निम्ति सहज र आवश्यक वातावरण बनाउनेमा सरकार दृढसमेत देखिन्छ । स्थिर सरकार गठन भएको हुँदा विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना प्रवल बन्दै गइरहेको छ र विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धिका भ¥याङ उक्लिने सरकारको सदीक्षाले पनि मूर्त रुप पाउने देखिन्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित तुल्याउन र लगानीको उचित वातावरण रहेको सन्देश दिलाउन सरकारले आगामी चैतमा लगानी सम्मेलनको आयोजनासमेत गरेको छ । २०६२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि आयोजित लगानी सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायहरुले लगानीको प्रतिबद्धता गरेका थिए । प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप लगानी भित्रिन नसके पनि नेपालमा लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाउने कार्यको सुरुवात भने त्यो समय भएको थियो । त्यसलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी चैतमा हुने लगानी सम्मेलन भने कुनै पुनर्निर्माणका लागि नभई जलविद्युत्, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हिसाबले आयोजना हुन लागेको छ ।
तर, लगानी सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई ‘अबचाहिँ नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण तयार भएको छ’ भन्ने सन्देश दिन खोज्दै गर्दा एउटा विदेशी लगानीमा खोलिएको कम्पनीमा शृंखलावद्ध बम विस्फोट हुँदा त्यसले कस्तो सन्देश देला ? यस्ता घटनाले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनिसक्यो कि अझै बनिसकेको छैन ? भन्ने कस्तो सन्देश देला ? विदेशी लगानीमा निर्मित कम्पनी वा उद्योगहरुमाथि यस्तै बम विस्फोटका घटना भइरहने हो भने विदेशी लगानी भित्र्याएर देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा उन्मुख तुल्याउने सरकारको सपना साकार होला ? अहिले यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न पुगेको छ ।